China 6m ikanam ekwentị mkpanaaka Mgbapụta - Foton Aumark ụlọ ọrụ na-emepụta | JCT
JCT 6m ikanam ekwentị mkpanaaka ụgbọala - Foton Aumark（NlereanyaE-W3360）gbanwetụrụ na Foton Aumark Chassis na ikanam n'èzí zuru-agba ike na-azọpụta ihuenyo. Igwe gwongworo E-W3360 LED MOBILE TRUCK bụ ihe na-erughị mita 6, ọ nwere ike ịnwe ikikere ma chụpụ ya. Mgbe edere aha chassis nke obere ụgbọ ala ma nye ya ikikere, ọ nwere ike ịgafe n'obodo ahụ n'enweghị mmetụta na-adịghị mma nke ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na igbochi ụzọ. Jingchuan E-W3360 LED MOBILE TRUCK nwere usoro mgbasa ozi multimedia, na-akwado ọkpụkpọ U disk, ma na-akwado usoro vidiyo kachasị. Ọ ghọọla ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịmegharị kpamkpam, gbanwee ozi, atụmatụ nkwukọrịta na ọnọdụ n'oge ọ bụla. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ngwaahịa ma na-adọta ndị ahịa. Ọ bụ ụgbọelu nkwukọrịta mgbasa ozi ọhụrụ nke na-ejikọ mgbasa ozi, ntọhapụ ozi, na mgbasa ozi ndụ. Ọ bụ nhọrọ mbụ maka ndị ọrụ iji kwalite.
Nta na nlezianya, ma ọ bụghị dị mfe
Agbanyeghi na anakpo obere chassis pere mpe na obere obere, a na-eketa 100% nke nyiwe mgbasa ozi site na nnukwu gwongworo: 6.2m2 Ikanam zuru oke ihuenyo, otu uhie na-acha uhie uhie, igbe ọkụ na-agba ọsọ, na-agbanwe ma dị mfe.
Ihe eji eme ihe bu ndi mmadu
6m Ikanam ekwentị mkpanaaka adopts ọhụrụ wuru na-media njikarịcha akara usoro, nke bụ ihe adaba maka mmezi na ọrụ; Uzo uzo abuo mepere emepe, ubube na-ebughari ya na ihe ndi ozo ndi mmadu mejuputara ya, gbakwunye nhazi nke usoro eletriki, mee ka o nwekwuo ezi uche ma di nchebe, di mfe iji.
Hapụ site na njikwa, raara onwe ya nye City
Mgbe e debanyere aha chassis nke obere ụgbọala ma nye ikikere, ọ nwere ike ịgafe n'obodo ahụ n'enweghị mmetụta na-adịghị mma nke ịgba ọsọ n'okporo ụzọ na igbochi ụzọ. N'ezie ọ na-ahụ mgbasa ozi ndị a na-esote ma banye n'ime akụkụ ọ bụla nke obodo ahụ.
Eu ọkọlọtọ, obere nchekwa gburugburu ebe obibi carbon
N'ikwekọ n'ụkpụrụ mba ụwa, a na-anakwere chassis chassis nke na-ezute ụkpụrụ ikuku Euro Euro / Euro uniform n'otu n'otu, nke nwere ike ịchekwa ike, belata nsị, ma belata mgbochi gburugburu ebe obibi.
Nkọwapụta oke (ọkọlọtọ)
1. N'ozuzu ya: 5995 * 2190 * 3300mm
2. Ikanam n'èzí ihuenyo zuru-agba ngosi (P6) nha: 3520 * 1920mm
3. Right n'èzí otu uhie ngosi ihuenyo (P10) size: 3520 * 320mm
4. N'azụ uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie (P10) nha: 1280 * 1440mm
5. Onyere na igwe na-agba dijitalụ, ọ nwere ike igwu 1-4 ihe ngosi mgbasa ozi static na loop.
6. Ike oriri (nkezi oriri): 0,3 / m / H, ngụkọta nkezi oriri.
7. Ejiri usoro nhazi vidiyo nke njedebe na njedebe maka mgbasa ozi ndụ ma ọ bụ mgbasa ozi na egwuregwu bọl, enwere ọwa 8, na ihuenyo nwere ike ịgbanwere ya.
8. Nwere ọgụgụ isi oge usoro na usoro nwere ike gbanye ma ọ bụ gbanyụọ Ikanam ihuenyo.
9, nke ejiri sistemụ multimedia na-egwu egwu, na-akwado ọkpụkpọ U disk, na-akwado usoro vidiyo kacha mma.
10. Onwem na ultra-jụụ generator set, ike 8KW.
11. Nzọụkwụ ntinye bụ 220V, malite ugbu a bụ 25A.
E-W3360（6m ikanam ekwentị mkpanaaka TRUCK-Foton Aumark）
Akara Fonton Aumark Akụkụ Mpụga 5995mm * 2190mm * 3300mm
Ike Cummins Total arọ 4495KG
Emission Standard EuroⅤ / Euro Ⅵ Arọ ụgbọala 4250KG
Ihuenyo 3200 * 1920mm Ntụpọ ntụpọ P3 / P4 / P5 / P6
Ikanam mmanya ihuenyo
Akụkụ duru Ihuenyo 3200mm * 320mm N'azụ Ihuenyo butere 1280mm * 1440mm
Ntụpọ ntụpọ 10 mm Ihie ≥5000cd / m²
Ala igbe dị ala
Ogologo Kanvas 3100mm * 1500mm Ala dayameta 75 mm
Number nkesịlịnda Mmiri 4-cylinder inline
Nkezi ike oriri
Nyochaa Kwado ntinye akara ngosi 8-ụzọ
Ngwaọrụ Media na iche iche iche nke nkịtị ji video njikọ, dị maka PC, igwefoto na wdg
Nke gara aga: JCT 9.6M Ikanam STAGE ụgbọala-Foton Aumark
Osote: 6m ikanam ekwentị mkpanaaka ụgbọala-Nanjing YueJin
Ikanam Mobile Truck N'ihi Sale, Ekwentị Mgbasa Ozi Ekwentị, Mobile Dugara Billboard Truck, Ikwute Mobile Truck, Dugara Mobile Trailer, Mobile Ikanam Screen Truck,